वाटरमार्क गरिएका फोटोहरू बेर आश्चर्यजनक
म तपाईको अनुप्रयोगलाई माया गर्छु! मैले यसमा केहि वर्षहरू भएको छ र यसलाई प्रयोग गरेर एकदमै रमाईलो गर्छु! गैर टेक्निक केटालाई प्रयोग गर्न सजिलो छ (त्यो म हो) र यसले अत्यन्त राम्रो काम गर्दछ! म मेरो फोटोग्राफहरू वाटरमार्किंगका लागि यसलाई लगभग १००% प्रयोग गर्दछु र सावधानी रहन आवश्यक छ कि वाटरमार्क मेरो फोटोग्राफ भन्दा राम्रो देखिन समाप्त हुँदैन! Really साँच्चिकै उत्तम दर्जेको अनुप्रयोगको लागि धन्यवाद। " - रिक अर्बन